Professor Yoshinori Ohsum Oo Soo Bandhigay Cilmi-baadhis Uu Ku Ibo-furay Mucjisada Soomka Qalinkii Xassan Cumar Hoorri | ToggaHerer
← Daawo: Cali Garaad Xanan Waa oday Wayn Oo Mudo Badan Darbi jiif Ah Lana nool Caruurta Xabagta ku nuuga Darbiyada .. Cali Waxa u ka waramayaa Nolosha Darbi-jiifka
Daawo: “Shalay Baaq ayaa laga Soo saaray Goof Oo aniga beeshayda ahaa Magacii ugu horeeyey ee aan maqlo waxaa lagu soo saaray Garxajis Bari, Waana markii ugu horaysay ee Ay media ha soo gasho kalmadaasi .. Ujeedaduna waa Arinta Dhex taala Biicdo iyo Sacad Yoonis in la gaadhsiiyo …” Boos Mire Wasiirka Cayaaraha →
Professor Yoshinori Ohsum Oo Soo Bandhigay Cilmi-baadhis Uu Ku Ibo-furay Mucjisada Soomka Qalinkii Xassan Cumar Hoorri
Published on June 5, 2018 by Magan
Professor Yoshinori Ohsum Oo Soo Bandhigay Cilmi-baadhis Uu Ku Ibo-furay Mucjisada Soomka
“Allah, dhowrsanaa oo korreeyay. ayaa mahadnaqu u sugnaaday. Allaha innagu galladay nimcada
Islaamka. Allaha innagu simay bisha Ramadaan ee tobanka hore gelbinayso naxariis, tobanka dhexena horseedayso denbi-dhaaf, iyo tobankan danbe ee Allah addoomihiisa ka xorreeyo naarta.
Ogow, wax kastoo diinteennu innagu waajibisay, Allah waxaa uu ku ladhay ama ku badhxay wax badan
aynaan ka warqabin, balse, ay innoogu sugan yahiin libinta ifka iyo liibaanta aakhiro. Sidaa darteed, qormadan oo ka tarjimaysa diraasad dhowaan lagu ibo-furay aqoonta kooban ee aadamaha, waxaa ay kor ka xaadinaysaa faa’iido kale oo innogu sugan soomka.
Haddaba, Prof. Yoshinori Ohsumi waxaa uu jiraa 73
sannadood. Shahaadada milgaha weyn ee Ph.D
waxaa uu qaatay 1974. Tan iyo waagaa, waxaa uu
wax ka dhigayay Jaamicadda Rockefeller, USA iyo
Jaamicadda Tokyo ee Japan. Intaaba, waxaa uu ku
fooganaa sidii uu uga niib keeni lahaa baadhitaanka
cilmiyeed. Ugu danbeyntii, mar uu ku guda jiray
shaybaadhka uu ku sidkay maskadiisa, qalbigiisa iyo
nolashiisa., waxaa ku soo dhacday farriintii uu
weligiiba u hanqal taagayey. “Hambalyo, waxaa aad ku guulaystay abaalmarinta Nobel.”
“Caruurnimadii wax badan ayaan ku hammiyay abaalmarinta Nobel. Hase ahaatee, markii aan baadhista gudo galay, waxaa aan dib u laqay candhuuftaydii,” ayuu Yoshinori u sheegay warsidaha Guardian isagoo la argagaxsan bogaadinta soo yeedhay. “Markaan arkay yoolka loo tartamayo, ma filayn in aan hanan karo abaalmarinta, balse, waxaa iga go’nayd in aanan ka daalin baadhista”.
Bare Sare Yoshinori, waxaa uu u tafo-xaytay arrin dunida ku cusub. Hubaal, qofkii faraha ku la jira cilmiga Saynisku (science) waxaa uu kala kulmayaa arrimo xiiso badan oo kolba ay soo baxdo kuwo kale
sii dardar geliya. Aqoon-dhaadhigu markii uu ka bogtay hidde-sidayaasha unugyada, kana faraxashay barashada qaabdhiskooda waxaa uu garowsaday in uu qadoodigu sal u yahay sida unugyada jidhku isu nadiifiyaan. Sannadkii 1992 waxaa uu daabacay buuggiisii ugu horreeyay ee uu ku shaaciyay natiijooyin la taaban karo. Waxaana xusid mudan in uu buugga ku muujiyay, “Qofka sooman in aanu tamar-dhigin xilliga uu afxidhan yahay, balse, waxaa uga sii kordha firfircooni dheeraad ah”.